Football Khabar » बार्सिलोनाले चेल्सीका विलियन भित्र्याउने पक्का !
बार्सिलोनाले चेल्सीका विलियन भित्र्याउने पक्का !
स्पेनिस क्लब बार्सिलोना इंग्लिस क्लब चेल्सीका विंगर विलियन अनुबन्ध नजिक पुगेको छ । यस्तो रिपोर्ट स्पेनका सबैजसो खेल मिडियाले प्रकाशित गरेका छन् । ब्राजिलका अनुभवी खेलाडी विलियनले चेल्सीसँग सम्झौता गर्न इन्कार गरेका छन् ।
चेल्सीसँग उनको हालको सम्झौता यसै वर्षको जुन ३० तारिखमा सकिँदैछ । अर्थात्, यो सिजनको अन्त्यसँगै । चेल्सीले टोलीमा अनुभवी खेलाडीको अभाव रहेका बेला विलियनसँग सम्झौता नवीकरण गर्न चाहे पनि उनी त्यो पक्षमा छैनन् । प्रशिक्षक फ्रान्क लाम्पार्ड विलियनलाई स्टामफोर्ड ब्रीजमै राख्न चाहन्छन् । किनभने, चेल्सीसँग खेलाडीको अपर्याप्तता छ । र, आगामी समरबाट उसले खेलाडी अनुबन्ध गर्ने पाउनेछैन ।
स्पेनका पत्रिका ‘मार्सा’ र ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’का अनुसार विलियनलाई फ्री ट्रान्सफरमा भित्र्याउन पाइने भएकाले बार्सिलोना उनीप्रति आकर्षित भएको हो । र, यो मिसन आगामी समरमा पूरा हुनेछ । विलियनमाथि बासिलोनाले सन् २०१८ बाटै नजर लाउँदै आइरेको छ । गत जनवरीमा बार्सिलोनाले विलियनलाई चाहेको थियो । तर, चेल्सीले नमानेपछि बार्सिलोना रोकिएको थियो ।
यो बताइन्छ कि, बार्सिलोनाले विलियनका एजेन्टसँग सम्भावित सरुवाका लागि औपचारिक छलफल गरिसकेको छ । र, डिल ‘लगभग’ फाइनल भएको दाबी गरिएको छ । यो सिजन सकिएँगै विलियन आफूले चाहेको क्लबमा जहाँ पनि जान पाउने हुँदा बार्सिलोना ब्राजिलियन खेलाडीलाई क्याम्प नोउमा प्रयोग गर्ने दाउमा छ ।
उमेरले हाल ३१ वर्ष पुगेका विलियन आक्रामक खेल शैलीका खेलाडी हुन् । बार्सिलोना उनीजस्ता अनुभवी खेलाडीलाई टोलीमा समेटेर टिममा थप सुधार गर्न चाहन्छ ।
प्रकाशित मिति १९ माघ २०७६, आईतवार १२:५८